N'ụwa ebe igwe aghọwo kpọmkwem akụkụ nke ndụ anyị, ọ na-ezi ọsọ ịchọta ọtụtụ n'ime anyị na-edebe mwute ozi anyị na igwe. Ọ bụ agaghịkwa ikwubiga okwu ókè ịsị na anyị igwe aghọwo ọzọ ma ọ bụ na-erughị anyị onwe anyị na ndị enyi ha. N'ezie, igwe na-nwayọọ nwayọọ na-ewere n'elu ọrụ na e egwuri site PC ruo ọtụtụ afọ ugbu a. Isiokwu a na-enye gị ihe na omimi ele na mkpa nke mmiri elu data echekwara na ekwentị gị ka na kwa na-enye gị ihe ghọta na ngwá ọrụ na i nwere ike iji ndabere dị otú ahụ mwute data.
Izu bụghị a ọhụrụ okwu ka ọtụtụ n'ime anyị na anyị niile maara ndị na-esi ike inwe site na nke a osote. Ugbu a, were bụrụ na i nwere ụfọdụ dị mkpa data setịpụrụ na ekwentị gị mgbe ahụ ị na-ekwentị! Na ike-abụ nnọọ kụda na otu nwere ike na-eche na ego nke ego ị ga-eweta na a ikele ọcha ahụ ọgbaghara.
Nke a wee na-kasị nkịtị n'ụdị ekwentị odida n'etiti ekwentị ọrụ na n'ụwa taa. N'ezie, ọ bụla gadget ka nwetara a okirikiri ndụ na ya 'nwere ike kwụsị na-enweghị ihe mgbaàmà. Ọ bụrụ na ị bụ onye uchu ekwentị onye ọrụ onye nwere akwụkwọ na mkpa kọntaktị echekwara na ekwentị gị, mgbe ahụ i kwesịrị-nọgide na-atọpụ gị data site na nke a n'ụdị ọdịda.
Kọmputa ụwa paradigm akọwa enwebeghị enweghị mgbasa nke obi ọgụ na iji nwayọọ nwayọọ na ụba n'elu a oge. Obi ọgụ na-emekarị na-n'ụdị software ọgụ na na ekwentị na-adịghị mma si dị otú ahụ ọgụ. Ụfọdụ ọgụ nwere ike ngworo os functionalities ahapụ gị na-enweghị oke ma iji wụnye a ọhụrụ OS-nke pụtara na ị ga-ejedebe adịkwa ụfọdụ dị mkpa stof site na ekwentị gị.
4.Lose nke Data n'amaghị
Ụmụ mmadụ na-ezughị okè ma na ọ bụ ihe kwesịrị ka anyị na-na-emehie ihe-emehie ka ihichapụ a faịlụ, kọntaktị wdg na-enweghị bu n'obi nwere ike ime ọ bụla oge. Ihe bụ nsogbu bụ data dị ka ego na ndị dị otú ahụ emehie ike ejedebe inye gị. Ya mere, nke a bụ ihe ị ga-achọ izere site na ekwentị azụ gbasie.
5.Quick mgbake Times
The mma na-akwado gị data bụ eziokwu na mgbake ugboro bụrụ na nke ọ bụla odida bụ na-emekarị nnọọ mfe ịnagide. On Kama nke ahụ, Oké mgbagharị nke na-agbake site data ọnwụ na-enweghị a azụ elu abụghị ihe onye ọ bụla na ọmụma dị oké mkpa na ya ma ọ bụ ya na ekwentị ga-achọ na-aga site.
Ugbu a na ị na-aghọta mkpa nke na ekwentị azụ elu, ọ bụ nnukwu oge anyị a lee anya na a nnọọ oru oma usoro nke na-eme a ekwentị azụ-elu. Anyị na-aga na-eji ngwá ọrụ a maara dị ka Wondershare Mobiletrans. The ngwá ọrụ bụ nnọọ vasatail n'echiche nke na ọ na-ahapụ gị ndabere data si ihu ọma ọ bụla ekwentị ọ ga-abụ na android, iOS, Sysmbian ekwentị. Ọzọkwa, ngwá ọrụ na-ahapụ gị weghachi data si aga backups, iCloud backups, blackberry backups, Samsung Kies backups gaa na ekwentị ọzọ.
Download na Wụnye Wondershare Mobiletrans
Ndabere data na kọmputa gị
Ndabere data na kọmputa gị, jikọọ ekwentị gị mgbe ahụ ẹkedori Wondershare Mobiletrans. Na software isi interface, pịa ndabere. Ego na niile data na ị chọrọ ndabere wee họrọ Malite Copy. Dị mfe dị ka na ị data ga-agafere gị na kọmputa.
Nyefee Data n'etiti dị iche iche ngwaọrụ
Ndabere ekwentị gị data gaa na ekwentị ọzọ mbụ ị ga-mkpa ijikọ ekwentị abụọ gị na kọmputa na iji eriri cables. Ẹkedori Wondershare Mobiletrans na pịa Malite. Chọta ekwentị na ekwentị transfer window na ọ bụrụ na niile njikọ site na USB ọdụ ụgbọ mmiri bụ dịkwa mma mgbe ahụ, ị ga-enweta ndị na-esonụ window. The data na-agafere ga-egosi na n'etiti abụọ igwe na onye ọrụ interface. Dị nnọọ ego na ndị na ị chọrọ ndabere wee pịa Malite Copy. Chere ka faịlụ na-depụtaghachiri ka ndị ọzọ na ekwentị.
Iweghachi nkwado ndabere na mpaghara
Ọ dị mkpa ka a nwere mkpirikpi mara otú nke otú iweghachi gị zọpụta data azụ ekwentị gị na-eme n'ọdịnihu. Wondeshare Mobiletrans akwado iji weghachi si backups mere site iTunes, iCloud, blackberry na MobileGo, wdg
Iweghachi gị data jikọọ ekwentị na ị chọrọ na-echekwa data na-eji eriri ọdụ ụgbọ mmiri, Họrọ Weghachi ke ufọk menu wee họrọ faịlụ format Ị na-azọpụta gị format na. The nzọụkwụ ọzọ bụ ịchọta ebe ebe ị zọpụtara gị azụ elu wee pịa na mmalite oyiri nhọrọ.
Na ndị a dị mfe ihe ndị ị pụrụ belata ihe ize ndụ nke na-aga na ike ike ụzọ ọzọ. Ọ bụ mgbe niile ka mma iji gbochie karịa iji gwọọ!
> Resource> Top List> Top 5 mere gị mkpa ekwentị ndabere